TV Station အတွက် 3KW Starpoint VHF Combiner | FMUSER
TV Station အတွက် 167-223 MHz 3kW VHF Starpoint Combiner - Model A
3KW VHF Starpoint Combiner ခန့်
အကောင်းဆုံးဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ VHF စတားမှတ် ပေါင်းစပ်သူလား?
FMUSER Multi Channels 3KW စတားမှတ် VHF Combiner တွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်-
အပ္ပနာဟိ 3kW VHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာ တိုးမြှင့်ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အင်တင်နာတာဝါတွင် နေရာလွတ်မရှိခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများအတွက် အကိုင်းအခက် VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို Starpoint ပေါင်းစပ်သူ သို့မဟုတ် ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစပ်သူဟုလည်း လူသိများကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိပါသည်။၊ အတူတူပါပဲ။ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစနစ် နည်းပညာသည် တီဗီထုတ်လွှင့်သူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ FMUSER 3kW VHF ပေါင်းစပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။အဆင့်မြင့် RF နည်းပညာနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် CAD နည်းပညာကို အသုံးချသည့် စုစုပေါင်း 3/4 အတွင်း အပေါက်များပါရှိသော၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် FM solid-state FM transmitter စုံတွဲအချို့ထံမှ အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ RF နည်းပညာရှင်များမှ နှစ်များအတွင်း အနှောင့်အယှက်မရှိ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအရာဖြစ်သည်။ စွမ်းအားမြင့် VHF ပေါင်းစပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် လာပါသည်။
သင်သည် လူသစ် သို့မဟုတ် RF ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။6channels transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တီဗီထုတ်လွှင့်မှုစနစ်တွင် ရှေ့နှင့်အောက်ပါအရာများကြား ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မတူညီသောချန်နယ်များအတွက် transmitter ၏ output များကို ချန်နယ်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပြီး အင်တာနာတစ်ခုအား များစွာအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက် FM အသံလွှင့်ကိရိယာ။
FMUSER သည် မတူညီသော ကာဗာများဖြစ်သည်။ transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများရောင်းရန်ရှိသည်။VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ ဟန်ချက်ညီသောပေါင်းစပ်ကိရိယာ (CIB)၊ ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစပ်ကိရိယာ (အကိုင်းအခက်ပေါင်းစပ်သူ)၊ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ကိရိယာ စသည်တို့ကဲ့သို့၊ အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် အံဝင်ခွင်ကျ အငြိမ်းစားယူခြင်းကို ရရှိပြီး မတူညီသော ပါဝါအဆင့်များနှင့် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သီးသန့် ကြိုးမဲ့ ကြိမ်နှုန်း ထုတ်လွှင့်မှု ဖြေရှင်းချက် နှင့် စနစ်ရှိ အလုံးစုံ အပြင်အဆင် သည် စစ်ထုတ်ခြင်းကို ပြန်သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ FMUSER မှ VHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။ စနစ်ဂီယာဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
3kW VHF Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်
ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် FM transmitter ထက် ပါဝါပိုရှိသော passive device တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိပြီးနောက်၊ ၎င်းကို ထပ်မံချိန်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ဟိ6လိုင်နာ VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ အင်တင်နာတစ်ခုတည်းမှ အချက်ပြများစွာကို ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်လျော်သောပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အချက်ပြမှုများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ transmitters များတွင် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိပြီး intermodulation ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
3kW VHF Starpoomy Combiner ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ သိထားရမည့်အချက်များစွာ
အကယ်၍ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရင်းနှီးနေရန် လိုအပ်ပါသည်။ rack room မှာ အသံလွှင့်ပေးရတယ်။ FM အသံလွှင့်စက်များ၏ အခြေခံမူများ၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်၊ တီဗီ ထုတ်လွှင့်မှု အသံလွှင့်စက်၊ FM အင်တင်နာ ၊ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ စသည်တို့ ၊ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အား မည်သို့မည်ပုံ သို့မဟုတ် ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော အကောင်းဆုံး FM နည်းပညာအဖွဲ့ ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များလည်း ရှိပါသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား အသံလွှင့်စက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည် အကောင်းဆုံး ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေး ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ၊ FMUSER ထုတ်လွှင့်မှု ဖြေရှင်းချက်အားလုံးသည် မတူညီသော ရေဒီယိုလိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက်၊ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါစေ၊ FMUSER သည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ယခင်အပိုင်းကတော့ 3kW VHF Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် | ကြိုးခုန်
ဘယ်လို အသံလွှင့်ကိရိယာမျိုးက အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်စက်လို့ ခေါ်နိုင်မလဲ။ ဒါက စဉ်းစားသင့်တဲ့ မေးခွန်းပါ။ ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို နမူနာအဖြစ် ယူပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရောင်းချနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၏ ရာနှင့်ချီသော အရောင်းအပြီးတုံ့ပြန်ချက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အကြောင်းအရာအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပြုလုပ်သောအခါ ပထမအကြိမ်တွင် စျေးနှုန်းနှင့် အသွင်အပြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ သာမန်လူများ ဂရုမစိုက်နိုင်သော အချို့သောအသေးစိတ်အချက်များက ၎င်းတို့အား ဆွဲဆောင်ခံရသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ လန်ဒန်မှ Jack သည် သူ၏မြူနီစပယ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှင့်မှု turnkey ဖြေရှင်းနည်းများထဲမှ တစ်ခုကို အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကို စိတ်ကြိုက်အစုံအလင်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အပေါက်3ခုပါသော 6kw တီဗီထုတ်လွှင့်သူပေါင်းစပ်ကိရိယာ. ဤမော်ဒယ်၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင်ပြေသောကြိမ်နှုန်းပေါင်းများစွာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Jack ရဲ့ အသံလွှင့်ဌာနက အဲဒီဒေသမှာ အကျော်ကြားဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။ 3kw VHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာ Jack နှင့် သူ၏ပရိသတ်များကို 2014 ခုနှစ်ကတည်းက ဝန်ဆောင်မှုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစည်းသူများ၏ အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက်တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် အပူချိန်အနည်းငယ်မြင့်တက်ခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မလိုအပ်တော့သော ပါဝါစွမ်းရည်ဒီဇိုင်း၊ ပါဝါပေါင်းစပ်မှုစသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံလွှင့်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် စွမ်းရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြောင်း အခြားဖောက်သည်အများအပြားက အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သင်သည် 3kW VHF Combiner ယခင်ကထက် ပိုလိုအပ်ပါသည်။
မင်းရဲ့ အသံလွှင့်ဌာနအတွက် စွမ်းအားမြင့် FM Starpoint Combiner ကို ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။
FMUSER သည် ထုတ်လုပ်သည့် အကောင်းဆုံး transmitter ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ VHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသပေါင်း 200+ အနီးတွင် ရောင်းချရန်၊ ဤနေရာတွင် သင်သည် transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူနိုင်သည်-
3kW VHF CIB Branched Combiner ၏ အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း
A 3kW VHF TV transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ FMUSER မှ RF ကို မတူညီသော အရင်းအမြစ်များစွာမှ ပေါင်းစပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို အမျိုးမျိုးသော ရလဒ်များကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် မတူညီသောအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3kW VHF Starpoint Combiner အကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
FMUSER 3kW VHF Starpoint Combiner ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်း
FMUSER 3kW VHF Starpoint Combiner ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း (ကိုးကားရန်သာ)
3-cavity၊ 4-cavity သို့မဟုတ် 6-cavity filters
× 650 410 680 မီလီမီတာ×
× 990 340 670 မီလီမီတာ×
~ 66 ကီလိုဂရမ်